यहाँ प्रेमको पाठहरू छन् हाम्रो मनपर्ने टिभी श्रृंखलाबाट चोरी गर्नका लागि - teles रिले
हाम्रो मनपर्ने टिभी कार्यक्रमहरूबाट चोरी गर्न प्रेमको पाठहरू यहाँ छन्
By bryanekobe	 On जुन 30, 2020
प्रेम कहिलेकाँही जटिल हुन सक्छ तर भाग्यले हामी असीमित पाठहरू प्रदान गर्न हामी प्लेऑफमा भरोसा गर्न सक्छौं!
प्रेममा हुनु अक्सर शुद्ध खुशी हुन्छ। यो सरल छ जब तपाईं यस राज्यमा हुनुहुन्छ, तपाईं उच्च पाउनुहुन्छ र तपाईंको उत्तम जीवन बिताउनुहुन्छ। जे होस्, यो सँधै स्पष्ट हुँदैन र यो हुन्छ कि तर्क र गलतफहमीहरू समावेश हुन्छन्। यदि हामी हाम्रो अन्य आधा धेरै माया गर्छौं भने पनि, यो हुन्छ कि हामी अब अवस्था सुधार गर्न के गर्न को लागी थाहा छैन वा यसलाई बुझ्न को लागी। र यो अझ गाह्रो हुन्छ जब तपाईंले कसैलाई लामो समयसम्म गोप्य रूपमा प्रेम गर्नुभयो। यदि यी शृ characters्खला चरित्रहरू नराम्रो परीक्षाहरूबाट जोगिएका छन् भने, ट्रेन्डी तपाईंलाई प्रेमको पाठहरूमा फर्कन आमन्त्रित गर्दछ जुन श्रृंखलाले हामीलाई सिकायो। वास्तविक जीवनमा ती मध्ये केही प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्!
अरूलाई आफ्नै गल्ती गर्न दिनुहोस्
यो भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ। जहाँसम्म, उसले अर्कोलाई प्रोत्साहित गर्नु र उसको सबै समर्थन दिन यो राम्रो हुन्छ कि उसले लगातार गल्ती गरिरहेको छ र तपाई सहमत हुनुहुन्न भन्ने दोहोर्याउनु भन्दा। डासनको सीजन In मा, जोई एक विद्यार्थीको साथ प्रेममा परिणत हुन्छ जब ऊ अझै उच्च माध्यमिक विद्यालयमा छिन। उनीहरूको रोमान्स बरु जटिल आधारहरूमा सुरु हुन्छ किनकि उनीहरू दुई फरक संसारमा विकास गर्छन्। उनको पक्षको लागि, पेसेले उनको लागि गम्भीर भावनाहरू महसुस गर्न थालेको छ।.
तर उनलाई व्याख्यान र गाली गर्नुको सट्टा, उनले उनलाई प्रोत्साहित गर्छ र जोडी अन्ततः उनीहरूको छुट्टै मार्गमा जाँदा उनको लागि त्यहाँ पहिलो पनि हुनेछ। पछि, उसले आफ्नो मुटुलाई जित्न सक्ने छ। संक्षेप मा, एक रोमान्स मित्रता को एक राम्रो खुराक को बनेको छ र अर्को समर्थन एक सफल सम्बन्ध को आधार को एक हो।
सबै भन्दा माथि अरूको खुशी
जब तपाईं कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तपाईं स्वार्थी हुनुपर्दैन र तिनीहरूलाई खुसी हुन दिनुपर्दछ यदि यसको मतलब तिनीहरू जाने जानेलाई स्वीकार गरेको भए पनि। ब्रदर्स स्कट सीजन of को सुरूमा पेइटनलाई ठीक त्यस्तै हुन्छ। उनले भर्खर महसुस गरेकी थिइन कि उनी अझै लुकासको प्रेममा थिइन् तर उनी ब्रूकलाई मन पराउँछन् भनेर उनी जान्दछन् कि उनीहरुलाई सँगै ल्याउन को लागी केहि गर्न र उनीहरुलाई सँगै फिर्ता जान अनुमति दिनेछ।
उनी यति टाढा जान सक्छिन् कि उनी आफ्नो भावनालाई मौन राख्न चाहन्छन् ताकि उनीहरूको प्रेम सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नहोस्। एक शानदार बलिदान! केहि समय पछि, लुकासलाई अन्तमा थाहा हुनेछ कि उनी पेटोनसँग प्रेम गरिरहेको छ र उनीहरूले सिरीजको सीजन6को अन्तमा विवाह पनि गर्नेछन्। यो केवल देखाउन जान्छ कि परोपकारी र विवादास्पद भएकोले भुक्तानी गर्न सक्दछ!
# जन्मदिन - सम्पूर्ण उपन्यास टिभी टीमले शुभेच्छा…
#NovelasTV - सिमोन भिक्टोरिया (शम र ला डोआ) ...
आफ्नो भावनाहरु अनावरण साहस को प्रमाण हो
प्रायजसो, जब हामी जान्दछौं हामी प्रेममा छौं, हामी डरलाग्दो भयौं कि यसलाई प्रेम्यलाई बताउँदछौं। वास्तवमा तपाईलाई यी तीन शब्दहरू भन्न सजिलो हुँदैन कसैलाई र अझ बढी यदि तपाईं यो व्यक्तिसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्न भने।। यद्यपि पतन पीडादायी हुन सक्छ, यसले तपाईंको क्रसलाई पनि बदलामा तपाईंको भावनाहरू प्रकट गर्न सक्छ। जो केहि पनि कोशिस गर्दैन जुनसँग उनीहरु भन्छन् केहि पनि छैन। यस बाहेक, लेक्सी ग्रेले उनको मार्क स्लोनलाई बताउन उनको दुस्साहस लिन समाप्त गरे कि उनले उनलाई अत्यन्तै सुन्दर वक्तव्यमा माया गर्छिन् कि हामीसँग अझै यसको बारेमा सोच्दै थियो। ग्रेको एनाटोमीबाट लिइएको सानो निकासी हाल एबीसीमा प्रसारण गरियो:
" म तिमीलाई माया गर्छु। म तिमीलाई माया गर्छु। र म तपाईं मेरो छाला अन्तर्गत छ। यो तपाई जस्तो रोग हो। म मार्क स्लोन बाट संक्रमित छु। र मँ केही गर्न सक्दिन तपाईको बिचारबाट, म अब सुत्न सक्दिन। म अब सास फेर्न सक्दिन म अब खान सक्दिन र म तिमीलाई माया गर्छु। म तिमीलाई हरेक दिनको हरेक मिनेट माया गर्छु र म तिमीलाई माया गर्छु। "
अन्यलाई पूर्ण रूपमा तिनीहरूको गल्ती र गुणहरू स्वीकार्नुहोस्
यो त्यहाँ पुग्न सँधै सजिलो हुँदैन तर त्यसो त यसको आधार हो। कोही पनि सिद्ध छैनन्, न तपाईं न त प्रियजन नै। त्यसकारण उसको अन्धकारको पक्ष सहित उनी पूर्ण रूपमा स्वीकारिनुपर्दछ, किनकि त्यसले उसलाई आज के बनाउँछ। यदि तपाईं कसैको साथ सम्बन्धमा जाने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, परिस्थिति जटिल छ भने पनि तपाईंले उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न प्रयास गर्नु हुँदैन। एलीनाले यो काम दमनसँग गर्न थाल्छिन् यो पिशाच डायरीहरू। उसले गल्ती गर्छ! यद्यपि, युवतीले उनको आवेगपूर्ण, स्वार्थी र गर्व पक्षको सामना गर्दछ.
अझ राम्रो, उनले उनलाई सन्तुष्ट पार्न सकेकी थिइन्, जसले क्याथरिनसँगको आफ्नो सम्बन्धबाट धेरै दु: ख भोग्नु परेको थियो। संक्षिप्तमा, कहिलेकाँही तपाईलाई तथ्यहरूको सामना गर्नुपर्दछ: हामी मानिसहरुलाई उनीहरूको गल्तीहरुको बाबजुद माया गर्छौं यदि तपाईले सुधार गर्न को लागी प्रयास गर्नु भएको अपेक्षा गर्नु भए पछाडि।
इमानदार हुनु सन्तुलित सम्बन्धको लागि महत्त्वपूर्ण छ
झूट बोल्नु तुरुन्तै एक रोमान्टिक सम्बन्ध मा एक छाया कास्टिंग छ। सत्य बोल्ने र स्वस्थ र ठोस जगमा एक जोडी निर्माण गर्न उत्तम छ। र तपाईं हामीलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वास सन्तुलित सम्बन्धको कुञ्जी हो। नबिर्सनुहोस् कि झूट बोल्नु र लुकाउनु भनेको ओलिभरको फेलिसिटीसँगको उसको सम्बन्धको लागि प्रायः कस्तो लाग्छ तीर. त्यसकारण उनले उनीमाथि भरोसा गर्नुको साटो उनीबाट एउटा छोरो छ भनेर लुकाउन उनले रुचाए। दुर्भाग्यवस, यो पहिलो पटक थिएन। विशेष गरी जब उसले उनीसँग कहिल्यै सल्लाह गरेनन्, वास्तवमा उनको जीवनमा उनलाई समावेश नगरी।
त्यसकारण युवतीले उनीसँग इमान्दार हुन नसक्ने मानिससँग बस्नु भन्दा उनलाई छोड्न रुचायो। पक्कै पनि, ओलिभरले लिआन युमा आफैमा भर पर्न सिकेको थियो, तर हामी फेलिसीको कारणहरू बुझ्दछौं। यदि सबै प्रेम पक्ष मा राम्रोसँग जान्छ, हामी तपाईंलाई बाहिरी बैंक श्रृंखला, नेटफ्लिक्स श्रृंखला हेर्नको लागि सल्लाह दिन्छौं जुन सबैले कुरा गरिरहेछन्।
यो लेख पहिलो पटक देखा पर्‍यो: https://trendy.letudiant.fr/ces-lecons-d-amour-a-piquer-a-nos-series-tv-preferenceses-a4805.html
यहाँ हाम्रो मनपर्ने टिभी श्रृ from्खलाबाट चोरी गर्न प्रेम पाठहरू छन्
यहाँ नयाँ नेटफ्लिक्स फिल्महरू र जुलाई २०२० मा हेर्नको लागि श्रृंखलाहरू छन्
कडा बजेट? यहाँ healthy स्वस्थ, सजीलो बनाउन को लागी व्यंजनहरु मात्र ingredients सामग्रीका साथ छन्
# जन्मदिन - सम्पूर्ण उपन्यास टिभी टीमले खुशीको ईच्छा राख्दछ ...
# नोभेला टिभी - सिमोन भिक्टोरिया (इम्पोस्चर र ला डोआ) अरसेलीसँग ...